Rikoodh: Goolkii Uu Riyad Mahrez Ka Dhaliyey PSG Oo Baal Dahab Ah Ka Galay Taariikhda Kubadda Cagta - Laacib
HomeWararka Champions LeagueRikoodh: Goolkii Uu Riyad Mahrez Ka Dhaliyey PSG Oo Baal Dahab Ah Ka Galay Taariikhda Kubadda Cagta
Rikoodh: Goolkii Uu Riyad Mahrez Ka Dhaliyey PSG Oo Baal Dahab Ah Ka Galay Taariikhda Kubadda Cagta
April 29, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Goolkii uu Riyad Mahrez guusha ugu horseeday Manchester City kulankii xalay ay ku garaaceen PSG, ayaa abaal dahab ah ka galay taariikhda kubadda cagta, kaddib markii uu ku barbarreeyey rikoodh cajiib ah.
Riyad Mahrez ayaa saxeexay goolka labaad ee kooxdiisa oo ahaa laad xor ah oo daqiiqaddii 71aad uu hoggaanka ugu dhiibay Manchester City, iyadoo uu shan daqiiqadood ka horna goolka barbarraha u keenay Kevin de Bruyne, waxaanay sidaas Manchester City 2-1 ugaga badisay PSG oo garoonkeeda joogtay.
Laacibkan garabka weerarka ka ciyaara ayaa noqday ciyaartoygii ugu goolasha badnaa tartanka Champions League ee kasoo jeeda waddanka Algeria, waxaanu la sinmay oo ay barbarro noqdeen halyeygii dalkaas ee Yacine Brahimi, iyagoo dhaliyey min siddeed gool.
Xilli ciyaareedkii 2017-18 ayuu Brahimi gool u dhaliyey FC Porto ciyaartii ay AS Monaco ku garaacday 5-1 bishii December isagoo rikoodhka ciyaartoyga ugu goolasha badan Champions League ee reer Algeria kala wareegay Sofiane Feghouli.
Laakiin Riyad Mahrez ayaa Arbacadii rikoodhkaas soo qabtay, waxaana gool qurux badan oo uu hoggaanka ugu dhiibay kooxdiisa uu ku noqday laacibkii labaad ee Algeria u dhashay ee siddeed gool ka dhaliya Champions League.
Leandro Paredes ayaa qalad ku galay Phil Foden daqiiqaddii 70aad, waxaana kubadda wada dul-istaagay Kevin de Bruyne oo inta badan laagta kubbadaha laadka xorta ah iyo Mahrez, waxaana wada-hadal kooban kaddib toogashada loo daayey Riyad oo isaguna kubadda ka dhex-saaray gidaarkii ay sameeyeen ciyaartoyda isku dhigayay kubadda, waxaanay dhexdooda martay Paredes iyo Presnel Kimpembe ka hor intii aanay shabaqa taabanin.